Kukunda kukuru kweReal Madrid muguta guru reSerbia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Kukunda kukuru kweReal Madrid muguta guru reSerbia
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Serbia Kuputsa Nhau • Spain Kuputsa Nhau • Sports • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau
Dai 21, 2018
Real Madrid rave shasha timu yeinonakidza Turkish Airlines EuroLeague Yechina Yekupedzisira 2018, zvichitevera kukunda kwakasimba kwe 85-80 pamusoro pemukwikwidzi wayo Fenerbahçe Doğuş Istanbul kuBelgrade's Štark Arena. Uku kukunda zvakare kunomirira gumith EuroLeague Championship yemumiriri weSpanish.
Yekupedzisira Four yakauya ichitungamira mumakwikwi epamusoro-soro eEuropean mukupera kwesvondo ku Štark Arena, nhandare huru yemukati yeSerbia. Uye shasha nyowani Real Madrid yakagadzwa korona semukundi neSvondo 20 Mbudzi mune yekupedzisira nhanho yeTurkey Airlines EuroLeague.
Chishanu manheru akaona mitambo yekutanga yeFinal Four. Vanotonga shasha Fenerbahçe Doğuş Istanbul na Žalgiris Kaunas vakatamba mutambo wemu semi-fainari wemutambo wegore rino na18.00 (yemuno nguva) uchiteverwa neCSKA Moscow neReal Madrid na21.00. Vachirasikirwa zvikwata zvemitambo iyi, Žalgiris Kaunas uye CSKA Moscow vakabva vatarisana kune mumwe wechitatu nzvimbo yemutambo nhasi muna 17.00 neChampionship Game iri kuitika pakati peFenerbahçe Doğuş Istanbul neReal Madrid na20.00.
Ipo galgiris Kaunas akahwina mutambo wechitatu nzvimbo 77-79 kurwisa CSKA Moscow mushure memutambo wekutanga wanhasi, Real Madrid yakahwina zvine mutsindo 85-80 pamusoro pemukwikwidzi wayo Fenerbahçe Doğus Istanbul pakupera kweMutambo weChampionship kuBelgrade's Štark Arena. Shasha yakahwina mutambo mushure mekunyora zvinotevera;
Period Nguva yekutanga; FB 17-21 RM
Nguva yechipiri; FB 40-38 RM
Nguva yechitatu; FB 55-63 RM
Ø Nguva yechina; FB 80-85 RM
Seimba yemusha yeTurkey Airlines, mu2017 Final Four, Istanbul yakambotamba kakakunda mukwikwidzi uye ye2018 Final Four, guta guru reSerbia rakaiswa zvakanaka kuti vagamuchire vakanakisa mubhasikiti. Manheru akaperera muReal Madrid nekukunda vachisimudza iyo inoshuva yeTurkey Airlines EuroLeague 2018 mukombe wakafadzwa nemapoka uye kutepfenyurwa nevapepeti vanopfuura makumi matatu nematatu kupfuura nyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu nemashanu.
Mr. Ilker Aycı, Sachigaro weTurkey Airlines weBhodi uye Executive Committee, vachitaura nezvekupedzisira kunonakidza pakati peFenerbahçe Doğuş Istanbul neReal Madrid; "Belgrade yakapa chiitiko chinoshamisa kune imwe inofadza Turkish Airlines EuroLeague Final Four, kuno muguta guru reSerbia kekutanga. SeTurkey Airlines tinoda kutenda Belgrad nekugamuchira vaenzi kwakanaka kwakaratidza mumazuva matatu apfuura. Yekupedzisira Four yakakwikwidza mumakwikwi eEuropean akakwirira uye epamusoro-soro bhasiketi neyakajeka mitambo uye simba. Tinokukwazisai nemwoyo wese shasha yekupedzisira Real Madrid nemukwikwidzi wayo akabudirira Fenerbahce Dogus Istanbul uyo akashandura mutambo uyu wekupedzisira kuita mabiko anonakidza. ”
Pamhemberero dzemubairo paImba yeSerbia musi wa19 Chivabvu, shanu dzenyeredzi huru mumakwikwi e2017-18 dzakaziviswa; Nick Calathes wePanathinaikos Superfoods Athens, Nando De Colo we CSKA Moscow, Luka Doncic weReal Madrid, Tornike Shengelia weKIROLBET Baskonia Vitoria Gasteiz, naJan Vesely veFenerbahce Dogus Istanbul. Uye zvakare, iyo EuroLeague MVP, Luka Doncic weReal Madrid yakapihwa 1.000.000 Miles & Smiles Kufamba mamaira kubva kune anobatsira FFP yeTurkey Airlines.
Sekutsigirwa neTurkey Airlines, iyo chete ndege inobhururuka ichienda kune dzimwe nyika nekune dzimwe nyika kunzvimbo dzepasirese, Final Four mukwikwi zvakare yakapa vadikani vemitambo kutenderedza imwe yakasarudzika nharaunda uye ruzivo. Mumweya wechokwadi weTurkey Airlines, zviitiko 'zvinofadza zvakasiyana' zvakaitwa nezvikwata kubva kuTurkey Airlines neEuroLeague. Uyu waive zvakare mukana wekuenderera nezvirongwa zvakaitwa neOneTeam, EuroLeague chirongwa chekambani inoona nezvekutarisirwa kwevanhu chakasikwa nerutsigiro rwendege yeTurkey mu 2012.
EuroLeague Basketball yakavambwa muna2000 semakwikwi akakosha kwazvo e basketball muEurope, 2010 yakaona Turkish Airlines ichiva chinzvimbo chepamutemo chinotsigira mukwikwidzi pamwe nekutsigira denderedzwa rekupedzisira. Kuzvipira kweTurkey Airlines kumutambo kunoenderera, uye rutsigiro rweEuroLeague Basketball rucharamba ruchimhanya kwemamwe makore maviri kusvika 2020.